အပေါ် Posted 12 ဇန္နဝါရီလ, 2019 အားဖြင့် Holmbygden.se
ဆင်ခြေဖုံးကောင်လေးအဖြစ် Jesper “Nils”. ဓာတ်ပုံကို: ST.
Jesper လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ပြဇာတ်ရုံနဲ့စတင်. ယခုသူသစ်ကို revue ကြယ်ပွင့်နှင့်အ Sundsvall အတွက်စင်မြင့်ပေါ်မှာအောင်မြင်မှုကဲ့သို့အတတ်.
Holmes-goers ရွာထဲတွင်စိမျးလနျးမြင်ကွင်းတစ်ခု Holmes Vallen နေအိမ်ထဲကနေအများအားဖြင့် Jesper Eliasson ခံစားရတယ်. ဘောလုံးဖိနပ်ဖိနပ်၏မြင်ကွင်းတစ်ခုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျဆုံးခဲ့ကြသူ Sundsvall စီးတီး Revue နှင့်အတူပြန်ကြား. အခုတော့ Jesper ခြေဖြင့်နင်းရှာတွေ့မှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲပြဇာတ်ရုံထဲမှာနှစ်သစ်ကူး revue Eftersnack အတွက်အသစ်အ revue ကြယ်ပွင့်အဖြစ်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုး. ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသေး boka biljetter သူတို့သည်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်3ဖေဖေါ်ဝါရီလ.
Sundsvall Tidning အတွက် Jesper Eliasson ရဲ့ပြဇာတ်ရုံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းပိုမို Read:
အပေါ် Posted 24 ဒီဇင်ဘာလ, 2018 အားဖြင့် Holmbygden.se
ယခုnyspåratနှင့်တငျမွှောကျမိုဘိုင်း Holmes Vallen မှာသင် lit လမ်းကြောင်းအကြောင်းကြားရန်ခရစ္စမတ်ဧဝကိုဂုဏ်အသရေ. စန်တာမရောက်မှီတစ်လန်းဆန်းအလှည့်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ! လျှပ်စစ်အလင်းကိုလည်းဖွင့် (f.n. နာရီဝန်းကျင်). အဆိုပါလမ်းကြောင်းÖsterströmသို့သော်သူကဖွင့်လက်မောင်းကိုအဆုံး p.g.a မတိုင်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်. လဲသစ်ပင်များနှင့်အကိုင်းအခက်နှင်းဖုံး.
သတိရပါသင်အမြဲဒီမှာလတ်ဆတ်ပုဒ်အစီရင်ခံစာများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် နှင်းလျှောစီးစာမျက်နှာခြေရာခံ. လင့်ခ်ကိုလိုက်နာပါကသင်သည်လည်းက e-mail ဖြင့်အစီရင်ခံစာများကိုခြေရာခံဖို့စာရင်းသွင်းနိုင်တယ်, ဒါကြောင့်လက်မောင်းအဆုံးဖွင့်သည့်အခါဒါကြောင့်သင်ချက်ချင်းတစ်အသိပေးစာရ.
အပေါ် Posted5အောက်တိုဘာလ, 2018 အားဖြင့် Holmbygden.se
https://open.spotify.com/လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် / 0aXbuzMvLsq0qApCMMQuFu
http://www.americanpridemagazine.com/ဂီတ / Jessica-Falk-you-လုပ်နိုင်တဲ့-ရှေးခယျြ-to-ဖြစ်-a-တောက်ပ-အလင်း-သို့မဟုတ်-a-မှောင်မိုက်-မိုဃ်းတိမ်သည် /
အပေါ် Posted 8 စက်တင်ဘာလ, 2018 အားဖြင့် Holmbygden.se
Värna om demokratin och inte minst dina hjärtefrågor imorgon! Här ser du var du kan rösta på söndagen9စက်တင်ဘာလ.
အရင်းအမြစ်: Valmyndigheten, val.se.
24/12: Anundgåအတွက်Nyspårat ...
အဆိုပါသတင်း widget ကမှယခင်သတင်း လကိုရွေးချယ်ပါ ဇန္နဝါရီလ 2019 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (1) အောက်တိုဘာလ 2018 (1) စက်တင်ဘာလ 2018 (4) သြဂုတ်လ 2018 (1) ဇူလိုင်လ 2018 (5) ဇွန်လ 2018 (6) မေ 2018 (6) ဧပြီလ 2018 (2) မတ်လ 2018 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (2) ဇူလိုင်လ 2017 (2) ဇွန်လ 2017 (1) မေ 2017 (4) ဧပြီလ 2017 (2) မတ်လ 2017 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (4) ဇန္နဝါရီလ 2017 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (2) နိုဝင်ဘာလ 2016 (1) စက်တင်ဘာလ 2016 (4) ဇွန်လ 2016 (5) မေ 2016 (5) ဧပြီလ 2016 (3) မတ်လ 2016 (6) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016 (4) ဇန္နဝါရီလ 2016 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (3) နိုဝင်ဘာလ 2015 (4) အောက်တိုဘာလ 2015 (1) စက်တင်ဘာလ 2015 (5) သြဂုတ်လ 2015 (4) ဇူလိုင်လ 2015 (4) ဇွန်လ 2015 (3) မေ 2015 (7) ဧပြီလ 2015 (4) မတ်လ 2015 (4) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015 (4) ဇန္နဝါရီလ 2015 (8) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (3) နိုဝင်ဘာလ 2014 (4) အောက်တိုဘာလ 2014 (5) စက်တင်ဘာလ 2014 (3) သြဂုတ်လ 2014 (4) ဇူလိုင်လ 2014 (2) ဇွန်လ 2014 (6) မေ 2014 (5) ဧပြီလ 2014 (8) မတ်လ 2014 (11) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014 (4) ဇန္နဝါရီလ 2014 (7) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (12) နိုဝင်ဘာလ 2013 (12) အောက်တိုဘာလ 2013 (10) စက်တင်ဘာလ 2013 (9) သြဂုတ်လ 2013 (15) ဇူလိုင်လ 2013 (13) ဇွန်လ 2013 (18) မေ 2013 (17) ဧပြီလ 2013 (13) မတ်လ 2013 (11) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 (7) ဇန္နဝါရီလ 2013 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (9) နိုဝင်ဘာလ 2012 (9) အောက်တိုဘာလ 2012 (6) စက်တင်ဘာလ 2012 (10) သြဂုတ်လ 2012 (10) ဇူလိုင်လ 2012 (4) ဇွန်လ 2012 (11) မေ 2012 (10) ဧပြီလ 2012 (4) မတ်လ 2012 (7) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 (6) ဇန္နဝါရီလ 2012 (3) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (3)
17/1: utah: သတိပေးခြင်းလူတန်းစား 1, နှင်း, V ကို ... Snöfall som i södra delen fram... ဆက်ဖတ်ရန်
Snöfall ger risk för snöhalka och snör&... ဆက်ဖတ်ရန်